Barack Obama sex doll for sale in China from ကိုပီတာရဲ့အတွေးပုံရိပ်များ by peter kyaw | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » Barack Obama sex doll for sale in China from ကိုပီတာရဲ့အတွေးပုံရိပ်များ by peter kyaw
Barack Obama sex doll for sale in China from ကိုပီတာရဲ့အတွေးပုံရိပ်များ by peter kyaw
Posted by zinmyotun on Nov 5, 2010 in News |0comments
တရုတ်ပြည်ရောက် အိုဘားမားအရုပ်ရဲ့ ဖြစ်အင်….
အမေရိကန်နိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသားများအနေနှင့် ၎င်းတို့ ရဲ့ သမ္မတ ဘာရက်အိုဘားမားအပေါ် အချစ်ပျယ်နေ
တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေနိုင်ပေမယ့်၎င်းရဲ့ ပုံတူလေမှုတ် လိင်စိတ်အာသာဖြေအရုပ် ဖန်တီးပြုလုပ်သုံးစွဲနေ
ကြတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသား၊ တရုတ်လူမျိူးများအတွက်တော့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ သမ္မတကြီးဟာ အ
ပြစ်မမြင်ပဲ ချစ်ချင်စရာကြီး ဖြစ်နေပါသေးတယ်…
နက်ပြာရောင်ကုတ်အင်္ကျင်္ီဝတ်စုံ၊ လည်စည်းအနီရောင်နှင့် သမ္မတ အိုဘားမားရဲ့ မျက်နှာပုံတူ ကားချပ်ကို
ဦးခေါင်းမှာစနစ်တကျ သေချာကျနစွာဖန်တီးတပ်ဆင်ထားတဲ့ အဆိုပါ ပုံတူအရုပ်ကို တရုတ်နိုင်ငံတောင်
ပိုင်း၊ ဂွမ်ကျိူးမြို့ မှာ မကြာခင်က ပြုလုပ်ခဲ့ တဲ့ လိင်မှုဆိုင်ရာ ယဉ်ကျေးမှုပွဲတော်မှာ ပြသခဲ့ ပါတယ်…
အဆိုပါ အိုဘားမားအရုပ်ကို တစ်ခြားသော လိင်စိတ်ဖြေ အမျိူးသမီးပလတ်စတစ်အရုပ်များကြားမှာ မှီလျှက်
ထားရှိသည်ကို တရုတ်နိုင်ငံ သတင်းဌာနမှ ဓါတ်ပုံရိုက်ကူးခဲ့ ခြင်းဖြစ်ပါတယ်…
မစ္စတာအိုဘားမားဟာ တရုတ်နိုင်ငံမှာလူကြိုက်များကာ ကျော်ကြားလျှက်ရှိပြီး၊ ကွယ်လွန်သူ ကွန်မြူနစ်ပါ
တီဥက္ကဌကြီး မော် ရဲ့ ကိုယ်လုံးနှင့် ၎င်းရဲ့ မျက်နှာတို့ ပေါင်းစပ်ဖန်တီးထားသည့် ရုပ်ပုံပါရှိသည့် ” မော်ဘား
မား ” တီရှပ်ဟာ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အရောင်းရဆုံးကုန်ပစ္စည်း တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ ပါတယ်…
အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့် ပြီးသည့် အရွယ်ရောက်သူများသာ ၀င်ကြေးငွေ ယွမ် ၃၀ ( ၄.၅ ဒေါ်လာ ) ဖြင့် ဝင်ခွင့်
ပြုခဲ့ သည့် အဆိုပါ ဂွမ်ကျိူးပြပွဲကို လူပေါင်း သောင်းနှင့် ချီပြီး လာရောက်အားပေးကြည့် ရှုခဲ့ တယ်လို့ ပြပွဲ
စီစဉ်သည့်ဂွမ်ဒုံဂုံချွမ်း စီးပွားရေးဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်မှု ကုမ္ပဏီရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူတစ်ဦးက ဆိုပါတယ်…
ပြပွဲရဲ့ လူကြိုက်များတဲ့ ပြကွက်တစ်ခုကတော့ ယွမ်ငွေ ၉၈၀၀၀ တန်သည့်လိင်စိတ်ဖြေအမျိူးသမီးအရုပ်တစ်
” ဒီအရုပ်ကို ဘယ်ကုမ္ပဏီ၊ စက်ရုံက ထုတ်လုပ်တယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ မသိရပါဘူး…” လို့ အဆိုပါ
ပြောခွင့် ရပုဂ္ဂိုလ်ကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်…
သို့ သော် အင်တာနက်ပေါ်တွင် ပျံ့ နှံ့ နေသည့် အဆိုပါ အိုဘားမား အရုပ်ပုံနှင့်ပါတ်သက်ပြီး ပြည်သူအများ
ရဲ့ တုံ့ ပြန်မှုများကလည်း ကွဲပြားခြားနားကြပါတယ်…
နာမည်ကြီးယင် တရုတ်ပြည်ပို့ ပစ်မယ်….
” ဘာကြောင့် များ အမေရိကန်သမ္မတရဲ့ ပုံတူအရုပ်ကို တစ်ခြား အရည်အသွေးညံ့ တဲ့ အရုပ်တွေနောက်မှာ
ထားတာလဲ….ဘာလိုပဲဖြစ်ဖြစ် သူဟာ နိုင်ငံကြီးတစ်နိုင်ငံရဲ့ ခေါင်းဆောင်ပါပဲ….” လို့Netease အင်တာ
နက်ဖိုရမ်မှာ အမည်မဖော်လိုသူတစ်ဦးက မှတ်ချက်ရေးထားခဲ့ ပါတယ်…
” ( ဒီလိုဆို ) ကျွန်တော်တို့ လည်း ဘာကြောင့်မော်စီတုံး အရုပ် မရှိနိုင်ရမှာလည်း …” လို့ နောက်ထပ်
မှတ်ချက်ချသူ တစ်ဦးက ရေးသားခဲ့ ပါတယ်…
ပိုက်ဆံများရလို့ ကတော့ အကုန်လုပ်မယ့် တရုတ်တွေပါပဲ….
တရုတ်ပြည်အထိ နာမည်ကြီးယင်တော့ ယခုဖတ်ရတဲ့ အတိုင်း မတွေးရဲစရာပါပဲ…
Americans may have fallen out of love with Barack Obama, but the president of the United States is still an object of affection for the Chinese, who have remodelled him asablow-up sex doll. A doll wearingadark blue suit and red tie, and with Mr Obama’s face carefully screen-printed onto its head, was exhibited at the recent 8th Sex Culture Festival in the southern city of Guangzhou.